Ciidamada AMISOM oo laba qof oo shacaba ku dilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada AMISOM oo laba qof oo shacaba ku dilay Muqdisho
Ciidamada Nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ayaa saakay laba ruux oo shacaba ku dilay bartamaha waddada wadnaha ee Isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gawaari ay wateen ciidamada Nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ayaa saakay ku jiiray mooto Bajaaj ay saarnaayeen saddex ruux, laba qof oo rakaaba kuwaasoo la socday mootada ayaa goobta ku geeriyooday, waxaana dhaawac culus uu soo gaaray darawalkii mootada oo si deg-deg ah gaari Ambalas ah loogu qaaday, waxaana loola cararay Isbitaal.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa Isgoyska Howlwadaag ayaa isku dayay inay qabtaan Ciidanka AMISOM ee dilay dadka shacabka ah balse nasiib darro halkaas ayey isaga dhaqaaqeen.
Inta badan shilalka nuucaan oo kale ah ee la xiriira ciidamada AMISOM ayaa ka dhaca waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho. Waxayna sidan oo kale tiro dhowr jeer ah ku dileen dad shacaba oo saarnaa BL kaddibna isaga dhaqaaqay.